Catacombs nke San Callisto | Akụkọ Njem
Iche echiche banyere Rome ka ị chee echiche banyere oghere nke mmepeanya ọdịda anyanwụ, ugwu ya asaa, na ọmarịcha ihe owuwu ya, nke na-agba akaebe banyere oge ochie ya dị ka isi obodo nke otu n'ime alaeze kachasị n'oge ochie. Ma n'ezie na ọ bụ ịnụ obi nke Iso Christianityzọ Kraịst na-akụ site na Vatican Square.
N'ihi ogologo akụkọ ihe mere eme ya, na Rome enwere ọtụtụ ihe ịchọpụta. Akụkọ ndị na-akpali mmasị, ụfọdụ n'ime ha ka na-adịgide. Otú ahụ ka ọ dị banyere catacombs nke Rom, veranda dị n'okpuru ala nke Ndị Kraịst jiri mee ili ozu ruo ọtụtụ narị afọ. N'oge gara aga enwere catacombs karịrị 60 mana naanị ise n'ime ha abịakwute anyị na ezi ọnọdụ ileta ha.
N’isiokwu na-esonụ, anyị ga-agakwuru catacombs nke San Calixto iji mata mmalite ya, njedebe ya, njirimara ya na ọtụtụ ndị ọzọ. Echefula ya!
1 Mmalite nke catacombs
2 Catacombs nke Saint Callisto
3 Catacombs ndị ọzọ ama ama
4 Ihe nnọchianya na catacombs
5 Kedu ihe ị ga-ahụ na catacombs nke Rome?
6 Ọnụahịa nke tiketi maka catacombs
Mmalite nke catacombs
N’oge narị afọ nke XNUMX, ndị Kraịst nke Rome enweghị ebe ha na-eli ozu, nke mere ha ji banye n’ebe a na-eli ozu nke ndị ọgọ mmụọ na-ejikwa lie ndị ha nwụrụ anwụ. N'ihi nke a, Saint Peter na Saint Paul mgbe e gburu ha nwụrụ ka e liri necropolis nke Vatican Hill na Via Ostiense.
Ugbua na ọkara mbụ nke narị afọ nke abụọ, mgbe ha nwesịrị ụfọdụ ohere, ndị Kraịst malitere lie onye ha nwụrụ anwụ n'okpuru ala ma si otú a catacombs bidoro. E gwupụtara ọtụtụ n’ime ha ma bawanye ebe a na-eli ozu n’ezinaụlọ ndị ndị ha mere, nke mere ka ọ bụrụ Kristianịa n’oge na-adịbeghị anya, abụghị nanị debeere ndị ha hụrụ n’anya kamakwa mepeere ha ndị ọzọ.
Iwu ndị Rom nke oge ahụ ekweghị ka e lie onye ahụ nwụrụ anwụ n'ime obodo ahụ, ya mere, obodo ndị a ga-achọta catacombs nke Rome n'èzí mgbidi ya. Ọkacha mma na ebe zoro ezo na ebe zoro ezo n'okpuru ala iji nwee ike ịme ememe olili ozu Ndị Kraịst n’enweghị onye na-amaja.
Foto | Ebe njem kachasị mma
Site na iwu Milan, nke ndị eze ukwu bụ Constantine na Licinius kwupụtara n'afọ 313, Ndị Kraịst kwụsịrị ịta ahụhụ ma ndị catacombs gara n'ihu na-arụ ọrụ dị ka ebe a na-eli ozu ruo mmalite nke narị afọ nke XNUMX. N'ihe banyere catacombs nke San Callisto, ndị Chọọchị malitere nzukọ ya na nchịkwa ya.
Ọtụtụ narị afọ ka e mesịrị, n'oge mbuso agha ndị mbuso agha na Italytali (Goths na Longobards), a na-apụnara catacombs nke Rom mgbe niile ma na-amanye Pope ndị ọzọ ịfefe ihe onwunwe nke ili ozu na chọọchị dị iche iche nke obodo maka nchebe maka etiti narị afọ. Narị afọ XNUMX na mmalite nke XNUMX AD N'ụzọ dị otú a, catacombs gbahapụrụ wee nọgide na-echezọ ruo ogologo oge.
Na narị afọ nke 1822, Juan Bautista de Rossi (1894-XNUMX), onye e weere dị ka nna nke nkà mmụta ihe ochie nke Ndị Kraịst, nyochara catacombs karịsịa ndị San Calixto iji mụta banyere mmalite na nkesa olili ozu ndị a. Mgbe e mesịrị, ihe dị ka 1930, Holy See nyefere nlekọta nke catacombs nke Saint Callisto na Salesian Congregation nke Don Bosco dị ka onye nwe catacombs.
Foto | Civitatis
Catacombs nke Saint Callisto (Via Appia Antica, 126) malitere ịdị n'etiti etiti narị afọ nke abụọ ha bụkwa akụkụ nke ihe mgbagwoju anya nke bi na hectare 15, na ala dị iche iche nke ruru omimi karịa mita 20.
Catacombs nke San Callisto bụ ebe olili nke ndị popu iri na isii na ọtụtụ ndị nwụrụ n'okwukwe Ndị Kraịst na ntanetị nke veranda nke ihe karịrị kilomita 16 n'ogologo.
Ha na-enweta aha ha site n'aka diacon San Calixto, nke a họpụtara na mbido narị afọ nke atọ site n'aka Pope Ceferino ka onye nchịkwa nke ebe a na-eli ozu.. N'ụzọ dị otú a, catacombs nke San Callisto ghọrọ ebe a na-eli ozu nke ụka nke Rome.
Ha na-emeghe site na Tọzdee ruo Tuesday site na 9: 00 ruo 12: 00 na site na 14: 00 pm ruo 17: 00 pm
Foto | Nzukọ Virgin Mary
Catacombs ndị ọzọ ama ama
Na mbụ enwere ihe karịrị catacombs 60 mana naanị ise n'ime ha na-emeghe maka nleta taa. Ndị kachasị mkpa ma mara amara (San Calixto, San Sebastián na Domitila) dị nso na ibe ha site na Via Appia ma jiri ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke ọma na ahịrị 118 na 218.
Catacomb nke San Sebastián (Via Appia Antica, 136): kilomita iri na abụọ, ọ sitere na onye agha onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya na Kraịst, San Sebastián. Yana catacombs nke San Callisto, ha bụ ihe kachasị mma enwere ike ịhụ. Mepee site na Mọnde ruo Satọdee site na 12:9 nke ụtụtụ ruo 00:12 elekere ma site na 00:14 nke ụtụtụ ruo 00:17 pm
Catacombs nke Domitila (Via delle Sette Chiese, 280): Achọpụtara catacombs ndị a nke karịrị kilomita 15 ogologo na 1593 ma jiri aha nwa nwa Vespasian. Mepee site na Wednesde ruo Mọnde: site na 9:00 nke ụtụtụ ruo 12:00 ụtụtụ na site na 14:00 nke ụtụtụ ruo 17:00 elekere.
A na-echekwa catacombs nke Priscila (Via Salaria, 430): N'ime ha, a na-echekwa frescoes dị ezigbo mkpa maka akụkọ ihe mere eme, dịka nnọchite mbụ nke Virgin Mary. Enwere ike ileta ha site na Tuesday ruo Sọnde site na elekere 9:00 nke ụtụtụ ruo elekere 12:00 nke ehihie ma site na 14:00 nke ehihe ruo 17:00 elekere.
Catacombs nke Santa Inés (Via Nomentana, 349): Ha ji aha ha kpọrọ Santa Inés, onye nwụrụ n'ihi okwukwe Ndị Kraịst ya ma bụrụ onye e liri n'otu catacombs ndị mechara were aha ya. Enwere ike ịga leta ha site n ’elekere itoolu nke ụtụtụ ruo n’elekere 9 nke ehihie ma sitekwa na 00:12 nke ụtụtụ ruo 00:16 ụtụtụ. A na-emechi ha n'ụtụtụ Sọnde na n'ehihie Mọnde.
Ihe nnọchianya na catacombs
Ndị Kraịst oge mbụ biri n’etiti ndị iro. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ikwupụta okwukwe ha n'ezoghị ọnụ, Ndị Kraịst sere ihe osise na mgbidi catacombs ahụ ma kanye ha na ili ili ndị mechiri ili. Ihe nnọchianya kachasị mkpa bụ Ezigbo Onye Ọzụzụ Atụrụ, monogram nke Kraịst, nwanyị na-ekpe ekpere na azụ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na catacombs nke Rome?
Ga leta catacombs nke Rome ga-enyere anyị aka ịmata ebe ọnọdụ olili Ndị Kraịst dị n'oge a na-akpagbu okwukwe ha. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịga ije na paseeji wee lelee ihe eji egwu egwu ọtụtụ narị afọ gara aga.
Ọnụahịa nke tiketi maka catacombs
Okenye: euro 8
N'okpuru afọ 15: euro 5
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » Catacombs nke Saint Callisto